Umhla My Pet » 5 Tips Actionable ukutsala Inkazana amaphupha akho
ngokuthi Bill Achola
5 Tips Actionable ukutsala Inkazana amaphupha akho
ukubuyekezwa: Nov. 27 2020 | 3 min ukufunda
Ngaba uziva neentloni ngaphambi kwabafazi ungaphumeleli ukutsala kubo?
Ngaba ubunzima phantsi ukuzithemba phambi kwabo?
Kukho iindaba ezilungileyo kuwe. Asinguwe kuphela uvakalelwa ngendlela efanayo. Njengoko ilizwi odumileyo uya
“Abasetyhini zifana mazes, ukuba uziqonde, uyayiqonda ihlabathi”.
Ibali lam namabhinqa:
Ndandisoloko omnye abo bafo kungaveli nokungafunwa yonke ehamba iminyaka yam kwisikolo aphakamileyo. Andizange ndiyazi into omawuyithethe okanye uyenze ukuba nendumasi nabafazi.
Umbuzo kuphela ukuba kusoloko kundiphuphisa kwam ukutsala abantu basetyhini? Bonke abahlobo ngeenxa zonke kum Ndandinabahlobo ndikhe wayengenakuyenza ukufuduka wokuqala ukucela intombazana ngaphandle.
Kuqala ubunzima ukusuka kukoyika ukuba lusenokungamkelwa. Kamva ndafumanisa ukuba uninzi amantombazana ngeenxa zonke kum babesele abebebandakanyeka kwaye kungoko nam onokuzenza.
Oku waqhubeka kwenzeke ixesha elide kude ungumkhuluwa wam banika iingcebiso ezimbalwa kum. Ndingasemva kwalo, yaye ngoko nangoko yaduma phakathi amantombazana.
namhlanje, Ndinomfazi kwaye yomhla abafazi ezahlukeneyo. Amava am namabhinqa yokuphatha Undenze umchazi ubugcisa abafazi ekutsaleni. Ezinye zezi ngcebiso leyo bunokukunceda kulo mba lulandelayo.
1. Yiba nentembelo:
Qiniseka ikakhulu akuthandayo kakhulu ngamabhinqa. Kufuneka uhambe elidlulileyo wonke umfazi sengqondo siqinisekile.
Ingxoxo angabathembi engqina ukuba uphethwe yanto na ithuba enkulu ngenxa abafazi.
Nabafazi abafana abantu bakwazi kuxhomekeka. ngoko ke, kusoloko uzame ukuqinisekisa ukuba abafazi bazi ukuba bomelele yaye bathembeke. Isuntswana self indumiso kunokukunceda ukutsala abasetyhini.
2. Zincome abafazi:
Abafazi sithanda uncome. Le yeyona ndlela ibhetele neyona wazama ngokubanzi ukutsala abasetyhini.
Uyakwazi ukuncoma bakhe endleleni nali-, malunga nendlela ehamba, iintetho, iilokhwe okanye ancume. enyanisweni, nantoni uncoma naye uza kwenza unoyolo.
A eninzi yabafazi sithanda yokuncoma malunga ubuhle bayo bangaphakathi. Ngoko ke nje uzame nokumncoma abafazi phezu ngokwendalo ezithambileyo kunye nothando, intliziyo olukhathalayo kunye nezinye izinto ezinjalo ngephanyazo ukufumana ingqalelo yabo.
3. Ngokuba ngumphulaphuli olungileyo:
Omnye umahluko osisiseko phakathi kwamadoda nabasetyhini, xa ndithi kuni amadoda ngengxaki, alindele ukuba ukuza nesisombululo kunokwenzeka.
nokuba, xa abafazi ndithi kuni ngengxaki, bona nje bafuna ukuba ukumamela ingxaki baqumbe naye.
Abasetyhini umdla kangako okanye hayi malunga isisombululo kwiingxaki. Ngenxa yoko, kuthabatheka kunene ngokuba nje ngumphulaphuli olungileyo kwaye ngezabo iindlebe zenu konke kufuneka athi. Oku kuya kubenza bacinge ukuba umthanda ngokwenene nokhathalelo ngabo.
4. Banike izipho:
Izipho ukwenza abafazi imyoli. Enye ezininzi iimpendulo ezibalulekileyo umbuzo nendlela yokutsala iintokazi ukubanika izipho ngalo lonke ixesha elivelayo. Ngokutsho kwabasetyhini, sisihlandlo elula njengoko touch yokuqala ekufuneka kubhiyozelwa.
ngoko ke, kucetyiswa ukuba ugcine idayari ukunikhumbuza kwemihla ezincinane iziganeko. Nika izipho abafazi ukubhiyozela yokukhumbula ngeveki okanye ngenyanga ezo ziganeko ukutsala kubo ngoko nangoko.
5. Yiba chivalrous:
Chivalry ikakhulu ixabiso ngabafazi lonke. Qiniseka ukuba bangazilibali iinkcukacha elincinane chivalry ezifana ukuvula ucango lwemoto ngenxa yakhe okanye lindile ide ahlala kwivenkile ukutsala yakhe. Ungaze ukumngxolisa wakhe okanye naliphi na umfazi ebusweni bakhe. Oku kuya kukunceda ukuba ube womoya onamandla kakhulu umfazi ofuna woo.
Enye okuqukumbela ingcamango malunga nendlela yokutsala iintokazi ukubonisa kubo kwicala lakho ngokweemvakalelo. Abafazi othanda amadoda anobukroti kwaye emotionless ke intsomi.
Wonke umfazi uthanda umntu oya kukhala egxalabeni lakhe. ngoko ke, xa kunokwenzeka, Ndiyambonisa ngecala lakho ngokweemvakalelo.
Amzeke ziimovie, dinala ukukhanya kwesibane. Ndizamile zonke ezi wazuza imihla emininzi zonke nangona ubomi bam.
nokuba, neendlela wooing nokutsala abafazi kwahluka ibhinqa elinye ukuya kwamanye. kwimigaqo olululo ndincede kundikhapha ngcono wena kule nkalo ukuze uzive ukhululekile ukubuza imibuzo ngakumbi.
kude kube ngoko ke, Intlahla egqibelele!
G-ndawo Facts Neentsomi
Yenza nezo emazingenziwa On Ukwenza Dating Intshayelelo First
6 Imibuzo ezingundoqo Cela Ngaphambi ngokuntywiliselwa kwichityana Dating
5 Tips ukwenza Great oluselayinini kuqala Dating Ingcamango